Kulanka albaabada u xiran yahay oo Muqdisho uga socda madaxweyne Farmaajo iyo Raysal Wasaare rooble | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Kulanka albaabada u xiran yahay oo Muqdisho uga socda madaxweyne Farmaajo iyo...
Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed Axmed Qoor-qoor iyo Cabdicasiis lafta-gareen ayaa ku guulaystay in ay wadahadal iskugu keenaan Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisulwasaare Rooble oo uu ka dhex taagan yahay khilaaf ka dhashay Kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Wararka aan helayno waxay sheegayaan in muddo labo saacaddood uu kulan albaabada u xiran u socdo madaxweyne Farmaajo iyo raysal wasaare Rooble oo ay wehliyaan labada madaxweyne ee Galmudug iyo K/Galbeed.
Wada hadalada ayaa diiradda lagu saarayaa sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka dhashay go’aanada kasoo kala baxay labada masuul ee dalka ugu sarreeya, go’aanadaas oo sababi kara in dalku galo qalaalase.
Rajo wanaagsan ayaa laga qabaa in madaxweynaha iyo raysal wasaaruhu ka heshiiyaan khilaafkooda sida ay tilmaamayaan warar horudhac ah oo laga helayo kulankooda, balse lama saadaali karo waxa ay ku heshiiyaan.
Illaa iyo hadda waxaa lagu guulaystay in labada masuul is xakameeyaan oo ay joojiyaan warqadaha xafiisyadooda kasoo kala baxaya ee khilaafka taagan sii hurinaya.
Previous articleMaxkamadda ciidamada oo heshay laba qof oo xog ka haya kiiska Ikraan iyo madaxda NISA oo loo yeerayo
Next articleDRC oo soo bandhigtay Teneders for The supply